Soosaarka Calanka-Xaglaha Xayeysiinta ugu Fiican iyo Warshad | Farshaxanka & Farshaxanka Jesson Flag
Ku muuji calammo muujinaya indho qabasho! Noocan calanka soo bandhiga waa mid ka mid ah aaladaha xayeysiinta ugu wax ku oolka badan, oo leh cabbirro daabacaad oo waaweyn, dhammaan fariimahaaga xayeysiinta si cad ayaa loo daabacan karaa oo si hufan loo gaarsiin karaa. Waxaa sii dheer, calamada muujinta xaglaha leh oo la timid xirmooyin qalab kala duwan ah oo aad ka xulan karto.
Ku Soo Jiido Feejignaan Dheeraad ah Calanka Xayeysiinta Xagasha Leh
Madax ka dhig oo ha leexdo oo dadku ha ku soo qulqulaan meheraddaada ama dhacdadaada iyagoo wata calanka xayeysiiska daabacan ee caadada ah ee soo jiidashada leh. Calanadan xayeysiiska ah ee xagjirka ah ee xagjirka ah laakiin waara ayaa lagu qaabeeyey astaantaada gaarka ah, xayeysiiska, ama farshaxanka munaasabadda oo lagu daabacay dhar u eg ilmada. Naqshaddan gaarka ahi waxay u oggolaaneysaa suuqgeyntaada iyo farshaxanka xayeysiinta inay ka soo dhex muuqdaan calammada kale ee xayeysiinta, taasoo kuu sahleysa inaad soo jiito feejignaan dheeri ah oo aad hesho faa'iidooyin badan oo xayeysiin ah.
Ku Daabac Fikirkaaga Dharka Mudada Dheer
Bixiye ahaan loogu talagalay alaabooyinka daabacan ee daabacan, waxaan bixinnaa xulasho adeegyo khaas ah, laga bilaabo farshaxanka, cabbirka wax soo saarka illaa dharka. Adoo ku siinaya xulasho ballaaran oo dhar ah, waxaan kuu oggolaaneynaa inaad hesho dharka ugu habboon iyadoo loo eegayo miisaaniyaddaada iyo dalabaadkaaga.
110g Polyester Knitted
130g Polyester Shinit Knitted
115g Polyester Fluorescent Polyester (Jaale iyo Oran)
Calanka Xayeysiinta Tayada Oo Ku Haboon Dhacdooyin Kasta Oo Xayaysiis Ah
Naqshadeynta gaarka ah ee calamada baalka ayaa ka dhigaysa mid ku habboon dhacdooyin kasta oo dhiirrigelin ah ama munaasabado ah. Calaamadaha xayeysiinta daabacan ee gaarka loo leeyahay ayaa laga heli karaa saddex cabbir oo kala duwan oo leh saldhigyo isku laaban oo ballaadhan sidaa darteed calammada xayeysiinta kaligood ayaa istaagi kara gudaha. Waxaa sidoo kale lagu heli karaa saamiga dhulka marka banaanka la dhigo sida qalabka adag, taas oo u oggolaanaysa inay ka hortagaan cimilada xun sida dabaysha iyo roobka. Calanadan xayeysiinta baalasha ayaa ah kuwo la qaadi karo oo sahlan in la dejiyo maadaama daqiiqado gudahood lagu taagi karo.
Calanka baalka oo noocyo kala duwan leh iyo cabirro kala duwan oo muujiya
Noocyadeena caadiga ah iyo kuwa xiisaha lihi way ku kala duwan yihiin waxyaabaha udubka u taagan. Nooca caadiga ah, tiirku wuxuu ka samaysan yahay aluminium halka deluxe-ku uu yahay fibaarig. Sidoo kale waxaan bixinaa calammo baalal caado u leh cabbirro kala duwan oo ku habboon baahiyahaaga.
S: Ma habeyn kartaa baaxadda calanka soo-bandhigga?
J: Waxaan kuu soo bandhigeynaa in ka badan 50 tusaalooyinka calanka oo aad ka xulan karto. Ama noo soo dir cabirrada gaarka ah ee qalabka, waxaan sidoo kale sameyn karnaa calanka muujinta kartida leh si uu ugu habboonaado.
S: Miyaad samayn kartaa calanka muuqaalka madmadowga leh?
J: Haa, waanu toli doonaa interlayer si loo kordhiyo dhumucda calanka muujinta, waxaa jira 2 dhar kala duwan oo kala duwan ah oo xulashada ah.
S: Mudo intee le'eg ayuu soconayaa calanka calanka?
J: Qaab dhismeedka Premier-ka oo leh waxqabad sare, sida tuubooyinka aluminium, fiber-ka iyo fiber xoojinta ulaha balaastigga ah ayaa la isticmaalaa. Nolosha calanka waxay kuxirantahay halka loo isticmaalo. Caadi ahaan, calanka calanka ayaa leh dammaanad ugu yaraan 6 bilood.
S: Sideed uxirtaa calanka muujinta? Sidee ku saabsan cabirka boorsada?
J: Waxaan u adeegsan doonnaa boorsada OPP iyo bacda PVC oo cabbirro kala duwan ka kooban si loo baakadeeyo baahiyahaaga.
Calanka loogu talagalay Xayeysiinta Ganacsiga
Xayeysiinta Calanka Sail
Calanka Xayeysiinta Dheer
Calanka Xayeysiinta ee Darbiga La Dhigay
Soo Bandhigista Dharka Qalooca
Muujinta Xiisadda Xiisaha Qalooca
Shaxan Logo oo rakiban
Shaxda la rakibay waxay dabooleysaa jiinyeer
Miisaska lagu rakibay daboolida leh Dib u Furan
Soo Bandhigida Dharka Toosan ee Dharka
Muuqaal Muuqaal Xiisad Toosan